धनी कसरी बन्ने ? धनी बन्ने १५ सूत्रसहित — Motivatenews.Com
काठमाडौं – विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू जीवनमा कसरी सफल हुन्छन् । एउटै धरातलबाट उठेका कोही अर्बपतिको सूचीमा विश्वभरि चर्चित हुन्छन् भने कोही किन गुमनाम हुन्छ ? आफूले आफ्नो जीवनलाई जिउने र त्यसको मूल्य बुझ्ने र नबुझ्नेमा यसले फरक पार्छ ।
चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक हुन् । कोरोना भाइसरको समयमा दक्षिण एसियाली मुलुकमा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरु सहयोग गरेर समाजसेवीको रुपमा चर्चामा आएका उनी त्यसभन्दा पहिले उनी व्यवसायिक सफलताका कारण चर्चामा थिए ।
कठिनाइ र आलोचनाको सामना गर्दै सफलताको शिखरमा आफूलाई उभ्याउन सफल ज्याक मालाई फाइनान्सियल टाइम्सले सन् २०१३ मा पर्सन अफ दि इयरको उपाधिसमेत दिएको थियो । सो उपाधि दिने क्रममा चिनियाँ उद्यमशीलताको प्रतीकको रुपमा उनको अद्भुत सफलतालाई साक्षीको रुपमा उनलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) अवसरको सोचाइलाई फराकिलो बनाउनुहोस्
मा सफलताको लागि अवसरको बाटोलाई फराकिलो कोणले हेर्नुपर्ने बताउँछन् । सबै सम्भावनालाई सँगै लिएर जाने र प्रत्येक अवसरको लागि बाटो खुला राख्दै जानुपर्छ भन्ने विचार उनी राख्छन् । यसले एउटा अवसरमा सफलता हासिल गर्न नसके पनि अर्को अवसरले पछ्याइरहेको हुन्छ भन्ने उनको मान्यता छ ।
२) हरेक अवसरलाई खुला रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्
३) आफूले आफैंलाई समीक्षा गर्नुहोस्
तपाईंको हालको स्थिति र तपाईंले चाहनुभएको स्थिति बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् । वास्तवमा तपाईं केको लागि त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ रु तपाईं कहाँसम्म पुग्न चाहनुहुन्छ रु त्यसको लागि तपाईं के सही मार्गमा हुनुहुन्छ रु भन्ने कुरालाई समीक्षा गर्नुहोस् ।
४) जे गर्नुछ छिटो गर्नुहोस्
५) परिस्थितिभन्दा परको कुरा हेर्नुहोस्
६) तपाईंको महत्वाकांक्षाको बाटो खन्नुहोस्
७) साहसी हुनुहोस्
८) तपाईंको युवावस्थाको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुहोस्
९) सिंगो टिमलाई साझा लक्ष्यमा एकीकृत गर्नुहोस्
१०) आफैँलाई बदल्न योग्य बनाउनुहोस्
११) आफूभन्दा राम्रो सीप भएकालाई काममा लगाउनुहोस्
१२) दूरदृष्टि, दुराग्रहरहित र सत् चरित्रयुक्त भएर जिउनुहोस्
१३) दृढ रहनुहोस्
१४) क्षमताभन्दा मनोवृत्ति महत्वपूर्ण हुन्छ
१५) सुरक्षित निर्णय लिनु क्षमताभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ
कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप निर्माणमा आजसम्मकै ठूलो सफलता, ९५ प्रतिशत प्रभावकारी
टेम्पो चलाएर पेन्सन पकाएकी कमलाको संघर्षको कथा
को हुन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमल ह्यारिस, किन मनाइयो भारतमा विजय जुलुस ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको सानदार जित, को हुन बाइडेन ?